Magufuli: Tanzania way ka xurowday fayraska Covid-19 - Tilmaan Media
Madaxweynaha waddanka Tanzania John Magufuli ayaa ku dhawaaqay in waddankiisa “uu ka xoroobay coronavirus” wuxuuna u mahad celiyay shacabka duceynayay.
“Cudurka corona waa laga tirtiray waddankeenna, Alle ayaana mahad leh,” ayuu yiri Mr Magufuli oo la hadlayay dad ku cibaadeysanayay kaniisad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Dodoma.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa walaac ka muujisay sida ay dowladda Tanzania u maareyneyso cudurka Covid-19.
Xukuumadda uu hoggaamiyo Mr Magufuli ayaa joojisay macluumaadkii joogtada ahaa ee lagu sheegi jiray halka ay marayaan kiisaska fayraska corona ee dalkaas.
29-kii bishii April, oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee xogta cudurka ku saabsan lasoo saaray, tirada kiisaska Tanzania waxay ahaayeen 509, halka dhimashaduna ay mareysay 21 ruux.
Hase yeeshee, Mr Magufuli wuxuu sheegay in isbuucii lasoo dhaafay cudurka laga helay 4 bukaan oo kaliya, kuwaasoo lagu daweynayay magaalada ugu weyn waddankaas ee Dar es Salaam.
Bishii lasoo dhaafay, dowladda Tanzania waxay ku gacan seyrtay digniin ay safaaradda Mareykanka ee dalkaas kasoo saartay in isbitaallada magaalada Dar es Salaam ay “aad u buux dhaafeen” iyo in fayraska “uu si xad-dhaaf ah ugu dhacayo dadka”.
Mr Magufuli wuxuu marar badan sheegay in xasaradda caafimaadka la buunbuuniyay, wuxuuna shacabka ku boorriyay inay ku cibaadeystaan masaajidyada iyo kaniisadaha. Wuxuu mar kasta ku celceliyaa in ducada ay tahay tan kaliya ee cudurka looga gudbi karo.
Muxuu yiri Magufuli?
“Waxaan u mahad celinayaa dhammaan diimaha. Waxaan u duceysaneynay oo aan u soomeynay inuu Alle naga badbaadiyo cudurkan saameynta ku yeeshay waddankeenna iyo caalamka intiisa kaleba. Laakiin Alle wuu aqbalay ducadeenna.
“Waxaan aaminsanahay, dad badan oo reer Tanzania ahna ay aaminsan yihiin in corona uu Alle naga baabi’iyay,” ayuu yiri isagoo dad cibaadeysanaya Axaddii kula hadlayay magaalada Dodoma.
Hadalkiisa waxaa soo dhaweeyay dadka qaar. Marka uu khudbaddaas jeedinayayna waa loo sacbinayay.
Mr Magufuli wuxuu sidoo kale wadaad diimeedyada iyo dadka cibaadeysanayay ku ammaanay inaysan soo xiranin maaskaraatiga wajiga iyo gloves-ka gacmaha, kuwaasoo loo adeegsado in fayraska la isaga difaaco.
Madaxweynaha Tanzania wuxuu ka mid yahay madaxda Afrika ee loo geeyay dalabka dawo dhaqameedkii ay ka codsadeen madaxweynaha Madagascar – taasoo la sheegay inay dawo u tahay Covid-19.
Hase yeeshee ma cadda in dawadaas la siiyay bukaannada coronavirus ee dalka Tanzania.
Ma jirto caddeyn dhinaca seyniska ah oo loo hayo in dawadaas ay wax tar u leedahay cudurka, Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaana dadka uga digtay inay isticmaalaan dawooyin aan la ansixinin.
Madaxda mucaaradka ayaa horay ugu eedeeyay Mr Magufuli inuu taageerayo waxyaabo dhibaateynaya caafimaadka dadka reer Tanzania.
Madaxa arrimaha caafimaadka ee Tanzania, Elisha Osati, oo dhawaan wareysi siisay BBC-da ayaa dowladda ku taageertay fikirka ku saabsan in laga adkaatay Covid-19, iyadoo sheegtay in dadka cudurka u taga isbitaallada ay yihiin kuwo qaba calaamado aad u sahlan.
Askar lagu eedeeyey inay laaluush qaateen oo lagu xiray Muqdisho